25 Logistics Center ka 9 Hawlaha Operating Qorshaysan in Start dalka Turkiga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara25 9 Hawlaha Operating Qorshaysan in Start Logistics Center ee Turkey
18 / 02 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Khariidadaha, Headline, TURKEY
Turkiyede xarunta logistics qorsheeyay bilaabay hawlo ka hawlgala u si
Turkey, xarumaha logistics u dhigay ilaa $ 1 trillion kaabayaasha dhoofinta ee mashruuca helay socda. 25 ka mid ah 9 xarumood ee loojistikada ayaa qorsheeyay in ay bilaabaan howlgalo. Labada xarumood ee loojistikada, oo dhismahoodi uu dhamaaday, ayaa loo diyaariyey furitaanka.
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa shaaca ka qaaday in ku dhawaad ​​2019 milyan oo tan oo xamuul ah laga soo qaaday xarumaha loojistikada sanadka 1.7. Wasiirka Turhan ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay in kaabayaasha ku meelgaarka ah loo samayn doono xawaaraha ku kordhinaya qiimaha ganacsiga e-melaha ee xarumaha saadka.
Turkey, ku saabsan 1 trillion dollars in ujeedooyinka mudada dheer in la dhiso xal cusub oo duurka ku kaabayaasha logistics in dhoofinta taageero. Qaab-dhismeedka dhexdiisa, xarumaha logistics waxay ku fuliyeen hawlgal muhiim ah kaabayaasha ku-saleysan saadka dhoofinta. Maalgashiga gaadiid ee qorshaysan, wadooyinka tareenka waxay noqdeen kuwa mudnaanta u leh qaababka. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa sharaxaad gaar ah u siisay Istanbul Ticaret heerka ay haatan marayaan xarumaha lojistikada, marka loo eego aasaaska lagu sameeyay iyo bartilmaameedyadooda.
KU SAABSAN Nidaamka Nidaamka Caalamiga ah
shuqulkiisa on logistics xarumaha ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Republic of Turkey sanadkii 2007, Turkish Tareennada State (TCDD) ayaa bilaabay channel. Waa maxay xaalada hada iyo hadafyadu?
Iyada oo ah isgoysyada jidadka u dhexeeya xarumaha dhaqaalaha adduunka iyo agabyada ceyriinka ah, waxaan sameynay maalgashiyo la taaban karo xagga gaadiidka iyo saadka si dalkeenu u kasbado dhaqaale, siyaasadeed iyo dhaqameed ka imaan kara suurtagalnimada ay ku sugan tahay goobta juqraafi ahaan. Sidoo kale, waddankeenu wuxuu leeyahay waayo-aragnimo muhiim ah xagga duulista waddooyinka caalamiga ah wuxuuna gaadhay awood uu kula tartamo waddamada kale ee suuqyada adduunka marka la barbar dhigo horumarka iyo deg-degga ah ee uu ku gaadhay sannadihii u dambeeyay qaab dhismeedka maraakiibta, tirada duulimaadyada uu qaadayo iyo is-dhexgalkiisa wax ku oolka ah ee nidaamka caalamiga ah. noqday. Maanta, gaadiidleyda Turkiga waxay ka shaqeeyaan juqraafi ballaaran, oo ay ku jiraan Kazakhstan iyo Mongolia ee bariga, Boortaqiiska iyo Morocco ee galbeedka, Suudaan, Cumaan iyo Yemen koonfurta, Norway, Sweden iyo Finland ee waqooyiga waxayna gacan ka geystaan ​​ganacsigeenna.
DHAQANKA GAADIIDKA GAADIIDKA
Markaan eegno sawirka guud, waaxda gaadiidka iyo saadka ayaa noqotay mid ka mid ah aasaaska dhismayaasha dhaqaalaha adduunka iyo ganacsiga caalamiga ah, kuwaas oo noqonaya kuwa maanta dunidan ku sii biiraya iskuna dhafan. Markan, waxaan u dejinnay bartilmaameed dalkeenna inuu noqdo xarun ganacsi oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah. Laga bilaabo Shiinaha iyada oo Kazakhstan iyo Azerbaijan galay Turkey oo halkaas ka xiran Europe, waxaannu nimid xafiiska waxaan isku dayaynaa inaan hagaajiyo Central Corridor tan iyo maalintii ugu horeysay. Mashaariicda Mega, waxaan sare u qaadeynaa faa'idada iyo muhiimadda ay siineyso marinka gaadiidka ee soo maraya waddankeenna. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku soo aruurinaa dhammaan qaababka gaadiidka hal saqaf si aan uga jawaabno dalabka gaadiidka ee Anatolia, Caucasus, Central Asia iyo China. Marka la isku daro gaadiidka, waxaan hubineynaa in xamuulku lagu qaado hal qeyb gaadiid iyadoo la adeegsanayo ugu yaraan labo hab oo gaadiid ayadoon loo baahnayn dib-u-rarida. Tusaale ahaan, wadada + tareenka ama wadada + badweynta… Anaga oo ku soo kordhinayna qiimaha dhaqaalaha dalka oo ay weheliso gaadiid isku dhafan, waxaan helnaa gaadiid ka jaban oo aamin ah. Si loo horumariyo gaadiidka noocan ah loona bixiyo dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin warshadaha logistics, waxaan hirgalinaynaa xarumaha saadka.
9 XARUNAHA LUUQADAHA FURAHA
Markaan eegno yoolalkayaga; Halkalı (Istanbul), Yesilbayir (Istanbul), Tekirdag (Çerkezköy), Köseköy (İzmit), Filyos (Zonguldak), Bozüyük (Bilecik), Hasanbey (Eskişehir), Gökköy (Balıkesir), Çandarlı (İzmir), Kemalpaşa (İzmir), Uşak, Kaklık (Kahramanmaraş), Palandöken (Erzurum), Yenice (Mersin), Kayacık (Konya), Kars, Boğazköprü (Kayseri), Karaman, İyidere (Rize), Tatvan (Bitlis), Sivas, Mardin, Habur. Dhismaha xarunta ayaa la qorsheeyay. Laga bilaabo sannadka 25, 2019 xarumo logistics; Uşak, Samsun (Gelemen), Denizli (Kaklik), Izmit (Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), Balıkesir (Gökköy), Kahramanmaraş (Türkoğlu), Erzurum (Palandöken) iyo Istanbul (Halkalı) hawl ayaa la galiyay. Dhismaha xarumaha saadka ee Mersin / Yenice iyo Konya / Kayacık ayaa la soo gabagabeeyey diyaarna loo yahay furitaanka. Hawlaha dhismaha ee xarumaha saadka ee Kars iyo İzmir / Kemalpaşa way sii socdaan.
Boqolkiiba 80 horumar baa laga sameeyay shaqooyinka dhismaha xarunta logistics ee Kars. Hawlaha dhismaha ee xarunta saadka ee 'mzmir / Kemalpaşa logistics' waxaa sidoo kale fulinaya Agaasimaha Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha. Ku dhawaad ​​9 milyan oo xamuul oo xamuul ah ayaa la geeyay 2019 xarumood oo loojistikada ah oo la furay sanadka 1.7. Soo bandhigida dhammaan xarumaha logistics, qiyaastii 35.6 milyan tan oo gaadiid dheeraad ah ayaa la siin doonaa warshadaha logistics ee Turkiga. Intaa waxaa u dheer, 12.8 milyan mitir oo laba jibaaran oo dhul bannaan ah, aag kayd ah, weel kontaynar ah iyo aagag maareyn ayaa lagu kasban doonaa
Isgaarsiinta ayaa sii kordheysa
Sidoo kale ma geli karnaa faa'iidooyinka xarumaha saadka ee dhaqaalaha dalka? Maxaa loogu baahan yahay xarumaha loojistikada? Maxay yihiin hawsha ay qabtaan inta lagu gudajiro e-dhoofinta iyo ganacsiga e-commerce?
Iyada oo ay weheliso koboca dhaqaale ee ganacsiga adduunka, waxaa la arkay in muddadu ay caan ku noqotay qulqulka badeecada soo-saare illaa macaamiisha, iyo maareynta gaadiidka, kaydinta iyo xarumaha qaybinta si tartiib tartiib ah u kordhay, iyagoo saamaynaya qaybta wax-soo-saarka ee caalamka. Xaaladda guud, xarumaha saadka, oo loo arko inay yihiin wadnaha gaadiidka xamuulka casriga ah oo soo saara gaadiid isku dhafan oo ka kooban dhammaan nidaamyada gaadiidka, ayaa noqday kuwo muhiim ah. Gaar ahaan, horumarka la taaban karo ee ganacsiga elektiroonigga ah ayaa kordhiya muhiimadda xarumahaas. Xarumahani waxay kaloo gacan ka gaystaan ​​horumarinta isku-dhafka gaadiidka iyagoo gacan ka geysanaya kartida ganacsi iyo horumarka dhaqaale ee gobolka ay ku yaalliin, taasoo kordhineysa tartamada shirkadaha ka hawlgala gobolka. Xarumaha logistikada waxay kordhinayaan tartanka gaadiidka iyo shirkadaha saadka iyadoo la adeegsanaayo nidaamyo tayo sare leh oo dhanka saadka ah, iyadoo la yareynayo qiimaha gaadiidka iyo shaqaalaha. Gaar ahaan barta xawaaraha ee ku darsata qiimaha ganacsiga elektiroonigga ah, kaabayaasha isku-xidhka ayaa la dhisi doonaa sidoo kale waxay hubin doontaa in la soo wareejiyo gaadiidleyda laga soo diro wadada weyn ilaa tareenka iyo badaha.
Waxay awood u siineysaa kor u qaadista silsiladda saadka, isticmaalka gawaarida, isticmaalka bakhaarka iyo ururka xoogga. Waxay sidoo kale keeni doontaa koror weyn oo ku yimaada wadarta mugga ganacsiga ee gaadiidleyda. Waxay gacan ka geysaneysaa wareejinta gaadiidka xamuulka qaada ee magaalada, yareynta taraafikada magaalada, iyo yaraynta ciriiriga taraafikada iyo shilalka. Waxay sidoo kale kaalin muhiim ah ka geysan doontaa taageerista yareynta wasakhowga deegaanka iyo taraafikada.
JAWAABAHA XIRFADAHA XARUNTA LOGISTICS
Qaabkee ayaa loo tixgaliyaa goorta la go'aaminayo xarumaha saadka?
Waxaan sameyneynaa daraasado muhiim ah anagoo go'aan ka gaarna qodobbada ay ka midka yihiin bedka iyo cabbirka xarumaha loojistikada la dhisi doono. Marka hore, waxaan aqoonsanaa dhulka iyo kaabayaasha ku habboon fidinta farsamo ahaan ku habboon ballaarinta. Waxaan baarnaa goobta juquraafi ahaan, qaab dhismeedka dabiiciga ah iyo xaaladda isticmaalka dhulka. Waxaan eegnaa sida ugu dhow ee khadka tareenka iyo isku xirka badda iyo marinnada hawada, haddii ay jiraan. Waxaan tixgelin siineynaa isku darka noocyo kala duwan oo gaadiid iyo fursado gaadiid oo isku-xir. U dhawaanshaheeda OIZs (aagagga warshadaha abaabulan) ee gobolka iyo tirada warshadaha ayaa sidoo kale ahmiyad weyn noo leh. Waxaan kale oo aan baaraynaa magaalooyinka iyo go'aamada qorshaynta, qorshayaasha horumarinta warshadaha ee gobolka, iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanka dhaw. Si kastaba ha noqotee, Agaasimeheenna Guud ee Sharciga Gaadiidka Adeeggu wuxuu hadda diyaarinayaa qabyo-qoraal ah "Xeerar ku saabsan Xulashada Goobta, Dhisidda, Oggolaashaha iyo Howlgalka Xarumaha Saadka". Iyadoo la raacayo qawaaniintaan, waxaan hadda soo qaadaneynaa nidaam ku saabsan habraacyada iyo mabaadii'da ku saabsan xulashada goobta, sameynta, oggolaanshaha iyo howlgalka xarumaha saadka.
Ku diiwaangeliso koboca wadashaqaynta wadada tareenka
Hawlwadeenada tareenka qaybta gaarka loo leeyahay ayaa xamuul dhan 2018 milyan oo xamuul oo xamuul ah 2.7. Qeybta gaarka loo leeyahay, oo kordhisay xamuulkeeda xamuul oo qaada 2019 milyan oo tan sanadkii 4.2, ayaa kordhisay xamuulka xamuulkan 55.5 boqolkiiba. Saas darteed saamiga qeybta ganacsiga gaarka loo leeyahay ee xamuulka xamuulka ayaa kor u kacay ilaa 12.7 boqolkiiba.
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa sidoo kale soo saaray bayaanno muhiim ah oo ku saabsan barnaamijka isbadalka ee ka imanaya gaadiid ilaa adeegga saadka iyo isgaarsiinta ee xamuulka xamuulka. Wasiir Turhan wuxuu sii waday jawaabihiisii ​​su'aalaha İstanbul Ticaret sida soo socota:
TALOOBIN KU SAABSAN ISBITAALKA
Waa maxay doorka xarumaha logistics doorka mashruuca isbadalka laga soo qaado gaadiid ilaa saadka?
Sida la ogsoon yahay, qiimaha xamuulka badeecada ama sheyga ceyriinka ee warshadaha ayaa saameyn ku leh go'aanka maalgashiga iyo tartannada shirkadaha. Kordhinta suurtagalnimada maalgashiga warshadeynta waxaa suurogal ah oo keliya iyadoo la kordhinayo fursadaha saadka iyo in la gaaro heerka qarashaadka saadka ee la tartami kara adduunka. Waxaan leenahay barnaamijkan, Turkey ee dhoofinta in ay gaadho koritaanka iyo ujeeddooyinka horumar waara, si loo kordhiyo ka qayb qaateen in ay ka iman kara koritaanka our ee logistics koritaanka degdeg ah sannadihii la soo dhaafay, waxaana ujeedadoodu tahay inay la galay Logistics Performance Index ka mid top 15 dal. Sidaa darteed, barnaamijka, waxaan diiradda saarnay sharciga, tababarka, caadooyinka, kaabayaasha iyo kordhinta tartanada shirkadaha ka howlgala waaxda si loo sameeyo qorshe wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan saadka. xoojinta booska caalamiga ah ee Turkiga ee logistics ah Iyada oo barnaamijkan, hoos u of logistics kharash in qiimaha guud ee load ee alaabta warshadaha iyo isticmaalka alaabta la dhammeeyayna suuqa, aan ujeedadoodu tahay in ay soo gaabin waqtiga gaadiidka. Xarumaha saadka ayaa ah waxa ugu weyn ee lagu gaarayo hadafyadan.
Tareenka wuxuu meel muhiim ah ka leeyahay maalgashiga xarunta logistics. Waddo noocee ah ayaa lagu raaci doonaa maalgashiga tareenka muddada soo socota? Maxaa la sameyn doonaa si loo kordhiyo heerka tareenka ee xamuulka xamuulka?
Xaqiiqdii, muhiimadda jidadka tareennada xilligan waa weyn oo mudnaan leh. Sidoo kale, Logistics Master Plan sabab this Turkey ka mid ah waxyaabaha mudnaanta ee tareenada ee maalgelinta waxaanu fileynaa hab yahay. Si kastaba ha noqotee, waxaan sameynay qorshe maalgashi si loo daboolo qaabab kale. Halkaan, marka lagu daro khadadka Ankara-Sivas Ankara-İzmir YHT, waxaan sameyn karnaa Gaziantep-Mersin, Eskişehir-Antalya tareenka, Band ,rma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli. Sidoo kale gudahood baaxaddaan Halkalı-Kapıkule railway, Konya-Karaman-Yenice train, Gebze-Istanbul Airport-Halkalı Buundada saddexaad ee Bosphorus (Yavuz Sultan Selim Bridge) ayaa laga dhisi doonaa wadada. Saldhigga isweydaarsiga ee Kars, Xarunta Hawl-gallada Hawada, Portyo Froor, albaabka bixitaanka ee Badda Madoow, hagaajinta awoodda, xaqiijinta, saxeexida iyo hagaajinta awoodda, iyo sidoo kale OIZs, iyadoo lagu xirayo khadadka dekedaha iyo tas-hiilaadka muhiimka ah ee tareenka. waxaan ku dari.
SHAQAALAHA SII DUGSIYADA GAARKA AH OO KU SAABSAN 12.7 PERCENT
Sanadkii 2017, 'Qaabka xorriyadda xoreynta' waxaa laga hirgaliyay waddooyinka tareenka si wax ku ool ah uga faa'iideystaan ​​maareynta waaxaha gaarka loo leeyahay. Waa sidee xaaladda hadda jirta ee xamuulka xamuulka? Sideed u qiimeysaa danaha qaybta gaarka loo leeyahay?
Agaasinka Guud ee Gaadiidka TCDD, oo la aasaasay kadib xurriyadda, ayaa wadar ahaan xamuul dhan 2019 milyan tan sanadkii 29.3, halka wadarta guud ee gaadiidka xamuulka kale ee tareenada tareenka loo diiwaan geliyey 4.2 milyan oo tan. Wadarta 33.5 milyan oo tan oo xamuul xamuul ah ayaa la daabacay. In kasta oo xadiidka xamuulka qaada ee qaybta gaarka loo leeyahay ay ahayd 2018 milyan oo tan sanadkii 2.7, waxay ahayd 2019 milyan oo tan 4.2. Qeybta ganacsiga gaarka loo leeyahay ee wadarta xamuulka xamuulka ayaa ka kordhay 9.5 boqolkiiba ilaa 12.7 boqolkiiba. Heerkan ayaa la filayaa inuu kordho sannadaha soo socda. In kasta oo qaybta qaybta tareenka ee xamuulka xamuulku uu ahaa 2017 boqolkiiba sanadkii 4.3, qaddarkan wuxuu kordhay 2018 boqolkiiba sanadka 5.15. Natiijooyinka rarka rarka rarka ee sannadka 2019, saamiga qaybta tareenka ayaa sii kordhaya. Tani waa geeddi-socod waxayna wax weyn ka tari doontaa qaybta sare ee waaxda, sida duulista. Tabarucahan ayaa kordhin doona kaliya xamuulka iyo rakaabka, laakiin sidoo kale tayada tayada wadooyinkeena tareenka. (İtohab waa)
Turkey Railway Logistics Xarumaha Map
Maanta oo Taariikh ah: 17 Febraayo 1923 Kongareeska Dhaqaalaha Izmir gudahiisa barnaamijka dahilinde
Nidaamka Korontada, Wadoyinka Korontada, Waxyaabaha Lagu Qaadayo Maalgelinta
Wareegga Uludag ayaa ka baxaya bartamaha magaalada
Macluumaadka Meteorological ee ugu horeeya ee laga helo Xarunta Sukeymaniye Ski
Ka soo qaad khadka tareenka ee ka sii gudbaya bartamaha magaalada Elazığ
Sadkuyular metro iyo taraamka ayaa basaska ka qaadi doona bartamaha magaalada
Tareenka oo dhex maraya bartamaha magaalada Aydın
Muzaffer Ermiş, Maareeyaha Hawlaha Dekadda Trabzon, ayaa soo jeediyay Ç Çamburnu Shipyard DK
Maareeyaha Hawlaha Dekadda Trabzon Muzaffer Ermiş 'Xarunta Saadka Shipyard…
Maaraynta Maareynta Tareenka ee Caalamiga ah ayaa ka bilaabmay Eskisehir
gaadiidka xamuulka ee tareenada
Xoreynta waddada tareenka
Halkalı-Ku xir jidka tareenka
Maalgelinta xarumaha saadka
TCDD Agaasimaha Guud ee Gaadiidka